umzimba Morning eminyakeni yamuva ngenxa yesizathu esithile, phathelana senanele yesikhathi esidlule. Mhlawumbe lokhu kungenxa yokuthi abantu namuhla bamatasa kakhulu futhi isikhathi sokuvivinya umzimba ekuseni, abaningi bengakwenzi lokhu. Futhi ezinye zazo zingabantu nje lazy kakhulu. Ukushaja kuyadingeka ukuqinisekisa ukuthi usuku ngalunye nge icala omuhle, kuba ngokuphelele ukhuluphalisa futhi ongenza umzimba ngemva kobusuku okulala. Futhi, ekuseni umsebenzi ikhuthaza kwesisindo nge usheshisa umzimba, ngoba ukunyakaza - ke njalo evutha fat ngokweqile. Futhi ngokuvamile, ukunyakaza - lena ukuphila!
Uma unqume ukuthi ukuvivinya umzimba ekuseni - ke yilokho okudingayo ukuze uphile ukuphila okugculisayo, ukuqala usuku ngalunye Nge gaphambi ngqo embhedeni (ngisho ngezimpelasonto!). Ukuzwa isevisi, noma kunjalo, musa uvuke ngokuzumayo, ulale, welule kuzo zonke izindawo. I ukusonta elula futhi ngilulekela kakhulu ngcono isimo sempilo njengoba ngcono kwegazi futhi uqinise imithambo yegazi. Ngakho-ke, ekuseni yokuzijwayeza is kahle kungase kutholakale njengendlela yokuthuthukisa hhayi kuphela izibalo, kodwa futhi nempilo.
Khumbula, uma umgomo ukuba unciphise umzimba futhi ufuna ukuyifinyelela, kumele wenze umzimba nsuku zonke, amahora ambalwa ngaphambi noma ngemva kokudla. Ngemva kwemizuzu engu-Twenty, ngemva kwesikole isidlo Kulula, isibonelo, ukudla i-apula noma aphuze ingxenye inkomishi yogurt.
Nasi Ukuvivinya for umzimba ekuseni, ngamunye wenza eziyisishiyagalombili - kashumi nambili:
Njengoba imisipha ekuseni dryish amakhaza emva ubuthongo eside, badinga induduzo. Ngenxa yalesi ukulingana intambo - imizuzu emihlanu jumping on kahle kulungele imisipha. Njengoba inketho - egijima noma usheshe endaweni liphuma emadvolo etulu.
Thina zehlela phansi, isikhundla sokuqala - elele emhlane wakhe, imilenze ibheke emadolweni, izandla zakhe kanye umzimba. Inhale - nokunqamula ukhalo phansi, exhale ngobumnene wehlise phansi.
Thina ukukhulisa imilenze iqonde kangangokuthi babengakwazi phansi i-engela 90 degrees. Amasekhondi ambalwa ukuzigcina phezulu, bese ngobumnene wehlise phansi.
Ohlezi phezu umata, osizweni izandla, phakamisa ngqo umlenze up.
squats Deep ukusiza ukuthola izibunu enhle nasemilenzeni. Gcina izandla phezu kwesifuba, izinyawo ibashiye phansi.
Lunges phambili ngesikhathi nokunye lokuqala ngakwesokudla, khona-ke umpristi umlenze kwesokunxele, futhi yakha izibunu enhle. Qinisekisa ukuthi emuva kwaba iqonde, nofunda esiswini. Kungcono ukugcina izandla zakho phezu okhalweni.
Ungakwazi ukwengeza egoba uhlangothi - ukuma ukuze imilenze ehlombe-ububanzi ngaphandle, izingalo kanye umzimba engezansi. Ingabe Nyakazisa ngapha nangapha ngaphandle ezihambayo okhalweni. Lo msebenzi namafomu waistline enhle.
Warm sekugcineni ukuhamba, kancane kancane ingasheshi. Ngokushesha ngemva ukushaja abakwazi ukuhlala noma ukulala - ke ngeke kube khona umphumela umsebenzi. Ushawa cool nokwenza imisebenzi yasekhaya noma ukuya emsebenzini.
Okunye futhi okubaluleke ngokufanayo ekuseni ekusebenziseni izingane. Noma yimuphi umntwana ekukhuleni kahle ngesikhathi esifanele umsebenzi ezidingekayo, okubandakanya kuwukuziphulula, nomkhombe, flexion nokwandiswa nasemilenzeni. Morning yokuzijwayeza izingane futhi ubangela ukusungulwa ithemba contact esiphakathi kukamama nosana lwakhe, ingane kuthuthukisa kwemizwelo futhi ikhuthaza ke, ngoba uma zonke manipulations ahambisana imilolotelo kanye emilolozelweni, ingane ngokushesha ufunde ukukhuluma nokuxoxisana. Isakhiwo umzimba Gymnastic, ngaphezu unhlangothi futhi isandiso, izingane ezineminyaka ephakathi kuka-izinyanga eziyisithupha ukuba iphathwe ezimfushane, okufutshane-vis kwi oluvundlile, ehamba izibambo, umdlalo nge ibhola (ugingqe).
Iyasiza ukudlala lo mntwana izinyoni ezinomsila Igwababa Kulungile, imbuzi zinezimpondo nezinye game-Amazing. It amuses ingane futhi umnikeza a eziningi imizwelo eyakhayo ekuqaleni kosuku olusha. Ngakho, musa ukufunda lazy futhi bachithe isikhathi ngenkuthalo nengane!
Ukushaja ekuseni - indlela elula afanelekele
Ukuvivinya umzimba ngendlela - kuyini? imiqondo Basic, Obonisa Wabasaqalayo
PayPal: okungukuthi, indlela yokusebenzisa, indlela yokusetha? Izibuyekezo ze-PayPal yokukhokhelana